မိတ်ဆွေ ပိုက်ဆံမဖြုန်းပါနဲ့…………. – Youth Bar
ခြင်းတောင်းအပြည့်စျေးဝယ်လာပြီး လိုအပ်တာတွေရလာလို့စိတ်ပျော်ရွှင်ရပေမယ့် တခါတလေ ငွေတွေအရမ်းကုန်သွားလို့ဝယ်ပြီးမှစိတ်ဆင်းရဲနေရတဲ့အခါတွေလည်း လူအားလုံးမှာရှိတတ်ကြပါတယ်။
ခြင်းထဲကပစ္စည်းတွေကိုပြန်ကြည့်ပါ။တခါတလေ မဝယ်လည်းရတဲ့ပစ္စည်းတွေ ပါလာတတ်ပါတယ်။တချို့ပစ္စည်းတွေက အိမ်မှာအရင်ထဲကရှိပြီးသားပစ္စည်းတွေလည်း ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
လိုရမယ်ရဝယ်ထားလိုက်ပြီး ဝယ်ပြီး၆လတစ်နှစ်အထိ မသုံးရတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ဒါ့ကြောင့်market placeတွေ ပေါများလွန်းတဲ့ခေတ်မှာလိုအပ်တဲ့အရာကိုပဲ ဝယ်ပါ။
ခြင်းတောင်းတလုံးနဲ့ပတ်ကြည့်နေပြီး ဝယ်ချင်တာကို ကောက်ထည့်ပြီး မိမိစိတ်နောက်ငွေလိုက်သွားတာမျိုးတွေကိုရှောင်ရှားပါ။သင်ခြင်းတောင်းအပြည့်နဲ့ဝယ်လာတာကို သင့်ကိုယ်သင်ဂုဏ်ယူနိုင်ပေမယ့် နောင်တချိန်မှာ ငွေမစုမိခဲ့လို့ ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေချိန်မှာ သင့်ဘေးမှာဘယ်သူမှရှိမနေနိုင်ပါဘူး။
တခါတလေ အိမ်မှာဟင်းတွေအများအပြားချက်ထားပေမယ့် မစားချင်တော့လို့အပြင်ထွက်စားကြတာမျိုး ရှိတတ်ကြပါတယ်။
အပြင်အစားအစာတွေဟာစားကောင်းတယ်အနံ့အရသာအိမ်မှာနဲ့မတူဘူး။ဇိမ်ရှိရှိစားနိုင်တယ်။စားရတာပျော်စရာကောင်းတယ်။ဟုတ်ကဲ့…ဒါပေမယ့် အမြဲလိုလိုဖြစ်နေရင်တော့ဒါဟာ ပိုက်ဆံဖြုန်းတီးတာသက်သက်ဖြစ်သွားပါတယ်
အပြင်မှာစားမယ်အစီအစဉ်ရှိရင် အိမ်မှာမချက်ပါနဲ့။နေ့စဉ်နဲ့အမျှ လွှင့်ပစ်ရတဲ့ဟင်းတွေ ရေခဲသေတ္တာထဲကနေ date ကုန်လို့ အမှိုက်ပုံးထဲရောက်သွားတဲ့ အစားအစာတွေဟာပိုက်ဆံနဲ့ဝယ်ယူထားရတာတွေပါ။ဒါ့ကြောင့်’ ဥစ္စာပြို စားဖိုက’တဲ့ ရှေးစကားပုံတောင်ရှိပါတယ်
လူတချို့ကိုအားမနာပါနဲ့။မိမိကုန်သွားမယ့်ပိုက်ဆံတွေဟာ တကယ့်မိတ်ဆွေတွေအတွက် ကုန်သင့်လို့ကုန်တာလား။မကုန်သင့်တဲ့လူတွေကို အားနာပါးနာနဲ့ကုန်ရမှာလား။အမြဲတွေးပါ။
သင်ဟာ ဘီလီယံနာ တစ်ဦးမဟုတ်တဲ့အတွက်တွေ့သမျှလူတွေ ကြုံသမျှကိစ္မ မြင်သမျှအရာရာအတွက် သင်ကပဲအကုန်ခံနေစရာမလိုအပ်ပါဘူး။
မိတ်ဆွေကောင်းတွေအတွက် သာရေးနာရေးဟာ မသွားမဖြစ်ကူညီရပါမယ်။ဒါပေမယ့် အားနေလို့ အလကားထထလုပ်နေတဲ့မွေးနေ့ပွဲတွေ တခါမှမကြားဖူးတဲ့လူတွေရဲ့မင်္ဂလာဆောင်တွေ ဘာမှန်းမသိတဲ့အလှူခံတွေ အတွက် သင်ကူညီနေရမယ်ဆိုတော့သင်ငွေစုမိမှာမဟုတ်ပါဘူး။
အရည်မရ အဖက်မရအရာတွေအတွက် ငွေသိပ်မဖြုန်းပါနဲ့
နေ့စဉ် ၂ထောင် ၃ထောင်ဖိုးကွမ်းစားတာတွေ နေ့စဉ် ဘီယာဆိုင်ထိုင်တာတွေအပျင်းပြေသုံးဖို့ ဖုန်းဘေလ် ငါးထောင်ကျော် နေ့တိုင်းကုန်နေတာတွေ နေ့တိုင်း spa သွားနေတာတွေ စတဲ့ အသေးသုံးငွေတွေဟာသင်သာ ဘရိတ်မအုပ်တက်ရင် အရှိန်ပါပြီး အကျင့်ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။
နေ့စဉ် ငွေအနည်းငယ်တွေဟာသိပ်မသိသာပေမယ့် လနဲ့တွက်လိုက်ရင် သင်ဖြုန်းတီးခဲ့တဲ့ငွေဟာသိန်းဂဏန်းဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ဒါ့ကြောင့် အသေးစားသုံးတာတွေကို လျှော့ချကြည့်ပါ။ငွေဖြုန်းတာ အကျင့်ပါတတ်ပါတယ်။ငွေမသုံးရ မဖြုန်းရရင် မနေနိုင်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။
သင်သတိထားကြည့်ပါ။အထည်ကြီးပျက်တော်တော်များများဟာ သူတို့အထည်ကြီးကို သူတို့ကိုယ်တိုင်ဖျက်ဆီးခဲ့တာများပါတယ်။သူတို့ကို သင်နမူနာယူပါ။တိုးပြီးမရှာနိုင်လျှင် ဖြုန်းတာတွေကိုလျှော့ပါ
ဟုတ်ကဲ့….အလုပ်အရ ဝင်ငွေပုံသေဖြစ်နေတဲ့သူတွေဟာ လကုန်ရင်ဒီလစာသာရမှာဖြစ်လို့ ဝင်ငွေတိုးမလာနိုင်တဲ့အခါ ဖြုန်းတာတွေကိုတော့ တက်နိုင်သမျှလျှော့ချကြည့်ပါ။
လူတော်တော်များများဟာ မလိုလားတာတွေအတွက် ဖြုန်းတီးခဲ့ကြရင်း အသက်တွေကြီးလာတဲ့အခါ စီးပွားရေးလည်းမလုပ်တက် ရင်းနှီးမြှ ုပ်နှံမှုလည်းမရှိနဲ့ ဆင်းဆင်းရဲရဲ အသက်ကြီးသွားကြတာကို မြင်ဖူးကြမှာပါ။အဲဒီလိုမဖြစ်အောင် ခုသတိပြုမိတဲ့အချိန်ကစပြီး ငွေမဖြုန်းပါနဲ့တော့
တစ်သောင်းဆယ်ခါဟာ တစ်သိန်းဖြစ်ပြီးတစ်သိန်းဆယ်ခါဟာ ဆယ်သိန်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် ငွေ တစ်သောင်းလောက်နဲ့ ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့မတွေးပါနဲ့ ငွေတစ်သိန်းဆိုတာ အေးဆေးပါလို့မတွေးပါနဲ့
အဲဒီ ငွေတစ်သောင်း ငွေတစ်သိန်းရဖို့ သင့်ထက်အများကြီးပင်ပန်းခံပြီး ရှာဖွေနေရသူတွေအများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတာ သတိပြုပါ။ဆင်းရဲလွန်းတဲ့အဖိုးအဖွားတွေအတွက် ငွေ တစ်သောင်း ငွေတစ်သိန်းဟာ အလွန်တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာ သင်မမေ့ပါနဲ့
မိတ်ဆွေ ငွေသုံးပါ။ ငွေမဖြုန်းပါနဲ့…
နေ့စဉ်ပဌာန်း အရှည်ကြီးကို မရွတ်နိုင်တဲ့ မိတ်ဆွေတွေအတွက် ထူးခြားတဲ့ပဌာန်းဆုတောင်း
လုပ်ရက်လေအရှင်ဘုရားရယ်………. (ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ် အထကကျောင်း ပင်မဆောင်မီးလောင်မှု သံဃာတော်မှ မီရှို့သည်ဟုဝန်ခံ)